Arch Linux တွင်ဖောင့်များ၏ display ကိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ပါ Linux မှ
Manuel de la Fuentes | | အသွင်အပြင် / ကိုယ်ပိုင်, GNU / Linux များ
စနစ်များ၏အဓိကအားနည်းချက်တစ်ခုမှာ နမ်း como Arch Linux ကို ၎င်းသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်သဘောသဘာဝအရတိကျစွာဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်တို့တွင်စံချိန်စံညွှန်းတစ်ခုခုမရှိသောကြောင့်အသေးစိတ်တိုင်းကိုဂရုစိုက်ရန်လိုအပ်သည်။
ဤဥပမာ၏ဥပမာတစ်ခုသည်ဖောင့်များနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည် မုတ် ဒီဟာတွေဟာသိပ်မကောင်းဘူးဆိုတာကိုသတိထားမိမှာပါ။ ကဲ့သို့သောအခြားအဆင်သင့်အသုံးပြုရန်စနစ်များနှင့်မတူသည် Ubuntu ကို သူတို့က start ကနေတော်တော်လေးကြည့်ဘယ်မှာ။
ပထမအဆင့်မှာအရင်းအမြစ်များကိုဖယ်ရှားရန်ဖြစ်သည် Xorg ၎င်းတို့ကိုတပ်ဆင်ထားလျှင် -
ထိုအခါကျွန်ုပ်တို့သည်တရားဝင် repositories မှဤဖောင့် package များကိုထည့်သွင်းမည်။
ယခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောင့်များပြသရန်အတွက် default package များကိုဖျက်ပစ်တော့မည်။
ပြီးတော့သူတို့ကို packets တွေနဲ့အစားထိုးပါလိမ့်မယ် Ubuntu ကို y Microsoft က (မုန်း, ရှောင်ကြဉ်ပါ။ ၌တွေ့ AUR။ သငျသညျကိုအသုံးပြုယူဆ Yaourt command ကတော့ဒါပါ။
ကျနော်တို့လုပ်ပြီးခါနီးပြီ။ အခုငါတို့ activate လုပ်ဖို့လိုတယ် ဆန့်ကျင်ရေးအမည်များတစ် ဦး optimization စတိုင်ထားကြ၏ အလင်း နှင့်အဖြစ် sub-pixel ဂျီသြမေတြီသတ်မှတ် RGB။ အောက်ပါနည်းလမ်းသုံးခုကိုရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအရာအားလုံးကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
သင့် desktop နှင့်သက်ဆိုင်သော font customization application ကိုအသုံးပြုခြင်း (GNOME, KDE, Xfce y LXDE တစ်ခုချင်းစီကိုသူတို့ကိုယ်ပိုင်ဆောင်ကြဉ်း။
ထည့်သွင်း LX အသွင်အပြင်, စိတ်ကြိုက် app ကို LXDE (# pacman -S lxappearance) နှင့်ရွေးစရာများကိုဤနည်းဖြင့်ညှိခြင်း (ပုံချဲ့ရန်ပုံကိုနှိပ်ပါ):
စာသားဖိုင်မှတဆင့်။ သင်၏သုံးစွဲသူဖိုလ်ဒါတွင်ခေါ်ဝေါ်သောဖိုင်တစ်ခုကိုဖန်တီးပါ .fonts.conf သင်တွေ့မည့်ကုဒ်ကိုကူးထည့်ပါ ဒီ link ကို.
ယခုဖောင့် cache ကိုရှင်းပစ်လိုက်ပြီ။
ထို့အပြင် session မှထွက်ပြီးအပြောင်းအလဲများကိုပြန်လည်အသုံးချရန်သာကျန်ရှိသည်။
ဒါကမင်းကိုကူညီလိမ့်မယ်လို့ငါမျှော်လင့်ပါတယ်၊ မင်းကတခြားနည်းလမ်းတစ်ခုခုကိုသိရင်မှတ်ချက်တွေမှာဝေမျှဖို့မတွန့်ဆုတ်ပါနဲ့။ 🙂
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အသွင်အပြင် / ကိုယ်ပိုင် » Arch Linux တွင်စာလုံးများ၏ display ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ပါ
43 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
ထိုသတင်းစကားကိုလွှင့်တင်လိုက်သောကောင်လေးသည်သတိထားမိသည့် troll ttitiitiriririr xd ဖြစ်သည်
ထိပ်ဖျား: ကျွန်ုပ်၏ဆောင်းပါးများကိုသင်အတည်ပြုသောအခါ၊ အမြင်အာရုံအယ်ဒီတာကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။ အစဉ်မပြတ်ငါ HTML မှာမြင်ကွင်းကနေသူတို့ကိုရေးတယ်။ သူတို့က visual editor ကနေဖွင့်လိုက်ရင်ဒီအဖြစ်အပျက်မှာလိုပဲပုံပျက်သွားနိုင်တယ်။
အမှန်တရားကတော့ screenshot ထဲကမေးခွန်းက ...
အချက်အလက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အမှန်တရားကတော့ Arch fonts ကိုငါသိပ်မကြိုက်ဘူး၊ အခုငါဘယ်လိုပြောင်းလဲလဲဆိုတာကြည့်ဖို့သူတို့ကိုပြောင်းလိုက်တယ်
PS: user-agent သည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်မလုပ်ပါ။ ၎င်းကို၎င်း၏အကြံဥာဏ်များအတိုင်း လိုက်၍ ပြုပြင်ပါကကျွန်ုပ်၏ browser သည် "အရမ်းဟောင်းနေပြီ" ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည် google + ထဲသို့ ဝင်၍ မရပါ။
နောက်ဆုံးစကားပြောရရင် UserAgent ထဲမှာ WebKit ထည့်ဖို့ကြိုးစားရင်ကော။
သငျသညျပွောဆိုအဆုံးမှာထည့်ပါ? အဲဒီလိုဆိုရင်၊ ငါ့အတွက်အလုပ်မလုပ်သေးဘူး။ g ... ... ငါ၌ရှိသောအရာများကိုငါနှိပ်လိုက်ပါ။ useragent.override: Mozilla / 5.0 (X11; Linux x86_64) Arch Linux Firefox / 11.0 WebKit
PD2 - အကယ်၍ Arch Linux ကိုသာထည့်ပြီးအခြားမည်သည့်အရာကိုမျှမဖော်ပြပါက၊
PD3 - ဒီနယ်ပယ်တွေမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ဖို့လမ်းမရှိဘူးလား။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဗားရှင်းကိုငါ update လုပ်ရင်ငါအရေအတွက်ပြောင်းတာကိုသတိမပြုမိဘူးလေ ...
ဖြေရှင်းချက်ငါ whatsmyuseragent.com မှရရှိသောအချက်အလက်ပျောက်ဆုံးနေသည်။ Arch ကိုကျွန်ုပ်၏ distro ကိုဤနေရာတွင်ကြည့်ရှုရန်ထပ်မံထည့်သွင်းသည် this အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် - Mozilla / 5.0 (X11; Arch Linux x86_64; rv: 11.0) Gecko / 20100101 Firefox / ၁၁.၀
အကြောင်းကိုထံမှသတင်းအချက်အလက်ကိုသုံးပါရုံ Arch / မှထည့်သွင်း / အစားထိုးလိုက်ပါ
စကားမစပ်၊ နောက်ဆုံးမှာဝီကီ (ဒီ post နဲ့တော်တော်လေးဆင်တူတယ်) ပြီးတဲ့နောက်ဖောင့်တွေတပ်ဆင်ပြီး configure လုပ်ပြီးအဆုံးသတ်ကိုကျွန်တော်အဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်။ microsoft ပို့စ်တွင်ဖော်ပြထားသောအကြံဥာဏ်များ (ttf-ms-fonts package) အရ Firefox သည်ကျွန်ုပ်အလိုရှိသည့်ပုံစံကိုမကြည့်ခဲ့ပါ။ g gnome-terminal သည်ရုပ်ဆိုးပြီးကျွန်ုပ်သည် monospace ဖောင့်များကိုပြောင်းရသည်။
ကောင်းကောင်းသင်ခန်းစာ။ အောင်မြင်စွာစမ်းသပ်ပြီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Hmm၊ ကျွန်ုပ်သည် Android 4.0 Roboto အရင်းအမြစ်ကိုအားလုံးနီးပါးအတွက်အသုံးပြုနေပြီးကျွန်ုပ်တွင်တိုင်ကြားချက်မရှိပါ။
သူတို့ကိုငါစမ်းကြည့်ရမယ် Droid sans, ကျွန်တော်ထွက်သွားသည် Ubuntu ဖောင့် ဘေးဖယ်။
သငျသညျ: CartoGhotic std ကို font ကိုကြိုးစားသင့်တယ်, ဒါဟာမည်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အပြည့်အဝကိုက်ညီနှင့်ငါ့အမြင်, က Droid ထက်ပိုကောင်းတဲ့နေရာဖြန့်ဝေ
၎င်းကို fontsquirrel မှကူးယူနိုင်သည်
သူတို့က Ubuntu font rendering package ကိုသုံးတယ်။ တစ်စုံတစ် ဦး ကကြိုးစားရန်လိုလျှင်, infinality အထုပ်ကိုအသုံးပြုရန်သောအခြားရွေးချယ်စရာ option ကိုထပ်ထည့်ပါ။
ငါ infinality package ကိုလည်းသုံးတယ်။ Ubuntu ပြုပြင်မွမ်းမံတာထက်စာရင်ပိုကောင်းတဲ့ရလဒ်တွေရတယ်လို့ပြောနိုင်တယ်။
Infinity အားဖြင့်သင်က rendering mode အများအပြားကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ Generic Linux, Ubuntu, Windows 98 / Vista / 7, Classic Mac နှင့် OSX, ထို့အပြင်၎င်းသည် cross-platform တစ်ခုဖြစ်ပြီး Ubuntu rendering နှင့်အတူဖြစ်ပျက်သကဲ့သို့ package ကိုတည်ဆောက်ခြင်းကိုနှောင့်နှေးစေသည်။
Arch ထဲ၌ထည့်သွင်းရန်သင်လုပ်ရန်လိုသည် -
၎င်းသည် fontconfig အတွက် patch တစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့ website တွင်သူတို့ပြောသည့်အတိုင်းမည်သည့် operating system တွင်မဆို "nice" font rendering အတွက် patch တစ်ခုပေးပါ။ http://www.infinality.net/blog/infinality-freetype-patches/
အိုး !! အချက်အလက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ငါစမ်းကြည့်ကြည့်စမ်းပါ ဦး ။ ဒါကငါ့ရဲ့ font rendering ကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်မလား Xfce?
၎င်းကိုကျွန်ုပ် ArchLinux + Xfce ပေါင်းစပ်မှုတွင်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် CartoGhotic std အရင်းအမြစ်ဘေးတွင်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။
Infinality က LibreOffice, Opera, Firefox နှင့် Qt applications များကဲ့သို့သောပရိုဂရမ်များသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းပြီးအလွန်ချောမွေ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်သတိပြုမိခြင်းမရှိသော်လည်း၎င်းတွင် "Chrome OS" ဟုခေါ်သော rendering mode ရှိပြီး "OSX" ကိုအသုံးပြုသည်။ ကောင်းတယ်
Yahoo အဖြေများသည်စတုရန်းမီတာလျှင် trolls အများဆုံးနှင့်နေရာတွင်ရှိသည်။
အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူငယ်ချင်း။ ဒါဟာ Chakra မှာပြီးပြည့်စုံတဲ့အရာဖြစ်ပြီးသင်ဟာ Real Hahaha ကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သဘောပဲ ... အခုသူတို့ဟာ ၄ နှစ်အရွယ်ရောက်နေပါပြီ
ကျွန်တော့်ကို Madridista မွေးဖွားခဲ့တယ်၊ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်, အစဉ်အမြဲမာနထောင်လွှားခြင်းနှင့်ဘုန်းအသရေ။ xD
ငါဟာဘာစီလိုနာဆန့်ကျင်ရေးကစားသမား XD ပဲမွေးဖွားခဲ့တယ်၊ မက်ဒရစ်ကိုသိပ်မကြိုက်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်သူတစ်ယောက်တည်းကိုသာခံရပ်နိုင်မယ်၊
terminal မှစာသည်ကျွန်ုပ်နှင့်ဆက်သွယ်သောကြောင့်မှသာလျှင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်လုပ်သည် (အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်« mo »ကိုရေးပါက« o »သည်« m »အတွင်းပိုင်းတွင်ပေါ်လာမည်)
သင် GNOME Terminal ကိုအသုံးပြုပါကအထက်ပါမှတ်ချက်များသည် Woqer ပြောသည့်အတိုင်း fonts များကိုပြောင်းလဲသင့်သည်။ ကျွန်ုပ်၏အစိတ်အပိုင်းအတွက် LXTerminal ကို သုံး၍ ပုံမှန်မဟုတ်သောအရာတစ်ခုကိုသတိမပြုမိပါ။
ဟုတ်တယ်၊ ငါမဖတ်ဘူး၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရမည်သည့်တပ်ဆင်မှုတွင်မဆို antialiasing ကို disable လုပ်ပြီးအနည်းဆုံးအရိပ်အမြွက်ဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။ system fonts အတွက် antialiasing ကိုတီထွင်ခဲ့သည့်ပါရမီသည်မည်သူဖြစ်ကြောင်းမသိသော်လည်း၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သော HDP ဖြစ်သည်။
မှတ်ချက်။ ။ စာလုံးကြီးသည်နည်းသော်လည်းကြီးမားသောအရာဝတ္ထုကိုကျွန်ုပ်ပထမဘ ၀ နှင့်နေခဲ့ရသည်။ သင်အဆိုပြုထားသောရွေးချယ်မှုထက်ကျွန်ုပ်သည်ဖန်သားပြင်ရှေ့တွင်နာရီပေါင်းများစွာကုန်ဆုံးရန်ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးဖတ်လို့မရပါ။
အချို့ဆိုဒ်များကိုပုံပျက်နေသည်ကိုသင်မမြင်ပါသလော။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ထိပ်ထိပ်ရှိ tabs များသည်သင်မည်သို့မြင်သည်ကိုမမြင်ရပါ sidebar မှာ ဒီဘလော့ဂ်၏ fit မတ ဦး တည်းချသွားသည်?
Arch ၌ _NEVER_ မှမည်သည့်အခါမျှပြproblemsနာများမရှိခဲ့ပါ၊ * NEVER * ။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တင်ဆက်မှုကိုအများကြီးတိုးတက်စေပါတယ်။ ငါပြီးသားဒီရှုထောင့်နှင့်ပတ်သက်။ စိတ်မရှည်ရတဲ့ခဲ့သည်။
တူညီတဲ့စိတ်ကူးပေမယ့် Debian အတွက်! ???
"libxft-ubuntu" ထည့်သွင်းရန်မအောင်မြင်ပါ။ ဒီဟာကိုဘယ်လိုပြင်ရမလဲဆိုတာသဲလွန်စ?
* -ubuntu ဖြင့်အဆုံးသတ်သော package များသည်မရှိတော့ပါ။ AUR တွင်၎င်းတို့ရှိ၊ မရှိရှိမရှိကြည့်ပါ။
ပို့စ်သုံးနှစ်အကြာမှာကျနော့်မှတ်ချက်ပေးဖို့လာခဲ့တာကတော့ဒါဟာ Antergos XFCE မှာရှိတဲ့ fonts တွေရဲ့ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ rendering ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပေးခဲ့တာတစ်ခုတည်းသောအရာပဲ။
အဆိုပါ infinility နှင့်အတူအရာအားလုံးနည်းတူကြောက်မက်ဘွယ်သောဖြစ်ခဲ့သည်။
ကောင်းပါတယ်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ Arch + gnome မှာဒီကိုသာကျွန်တော်အစေခံခဲ့ပါတယ်။